Azịza ya bụ mba. Ọ bụghị n'ihi na ekwenyeghị m na ha ga-adị ukwuu na ya, ọ bụ n'ihi na ha na-elelị ihe ịma aka niile dị egwu nke vidiyo akwadoro nke edozigoro n'ebe ọzọ. Youtube, Vimeo, Wistia, Brightcove, na a dịgasị iche iche nke Njikwa Akụrụngwa ụlọ ọrụ arụworị ọrụ site n'ọtụtụ nsogbu nke vidiyo akwadoro:
Player Atụmatụ - ikike ịgbakwunye ọkụ, ụdị, ịkpọ oku ime, akara, intros, outros list ndepụta atụmatụ ndị etinyere na ndị egwuregwu ekesara na-arịgo n'ihi na ụlọ ọrụ vidio akwadoro nwere ndị otu mmepe niile na-arụ ọrụ iji kwalite uru nke nyiwe ndị ahụ kwa ụbọchị. Ndị ọrụ dị iche iche na-eleba anya na nnabata vidiyo dị ka ọrụ ebe ha na-enyocha ya na ndepụta ma gaa n'ihu… mana nke a bụ teknụzụ nke chọrọ mmepe na ndozi na-aga n'ihu ka ngwaọrụ gbanwere, nnweta mgbanwe mgbanwe bandwidth, na ewu ewu nke atụmatụ gbanwere. Ndị ụlọ ọrụ ga na-anọkarị mgbe ha na-achọ ịzụlite ụlọ a.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - Ọtụtụ e dere banyere njikarịcha vidiyo ugbua… ma isi ihe anyi choputara bu na igwe ihe ichoro achoghi anya, kwadoro, ma obu nye ndi ulo oru ndi nabatara vidiyo ha aka. Ọ bụ ezie na vidiyo a na-ewu ewu ga-erite uru n'ikike ya, vidiyo agbakwunyere na ibe nwere ederede na ihe oyiyi ga-adịkwa mma, ma ọ bụrụ na ọ ka mma, karịa ibe vidiyo na-aga. Ihe ikpe dị bụ Youtube. Anyị nwere peeji dị na saịtị a nwere vidiyo Youtube agbakwunyere nke kachasị mma karịa ibe Youtube n'ihi na ejiri ọdịnaya kacha mma.
Ihe nlere nlekota vidiyo nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, gụnyere nchekwa a na-akwụ ụgwọ, mwekota na nhazi njikwa njikwa, na-ebipụta na nyiwe vidiyo ndị ọzọ, na -emepụta vidiyo vidiyo maka ịdenye aha yana gụnyere na ngwa ndị ọzọ nke 3 (dị ka ngwa mkpanaaka), transcoding na-akpaghị aka, ozi email, nyocha. ọba akwụkwọ, nkpado vidiyo na categorization, video thumbnail e kere eke, na ike ịkwanye mbipụta akwụkwọ na netwọkụ mmekọrịta gị. Ihe ndị a niile bụ atụmatụ nwere ike ịmegharị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nọrọ n'ụlọ gị - nke ahụ bụ ọtụtụ ọrụ.
Na nkenke, anaghị m enye ndị mmadụ ndụmọdụ hazie vidiyo nke ha. Ekwenyesiri m ike na azụ nke ọrụ na-eche ọtụtụ ụlọ ọrụ ihu ma a bịa na mmepe na teknụzụ bụ ogologo. Gbado anya na bailiwick gị. Iwepụta oge iji mepụta ihe ndị ọzọ na-arụ kwa ụbọchị enweghị isi. Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa adaala na teknụzụ enweela ọganihu iji mee ka BYO (wuo nke gị), enwere usoro ntọala na-agagharị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị na-enye ụlọ ọrụ ndụmọdụ ka ha wuo teknụzụ n'ime mgbe ọ nwere ezi uche - na-esonye na ndị na-eweta ndị ọzọ ebe ọ dịkwa mma.